सागको अबको संस्करण समयमै हुने, पाकिस्तानले नसके माल्दिभ्स र श्रीलंकाको संयुक्त दाबी ! | | Neplays.com
सागको अबको संस्करण समयमै हुने, पाकिस्तानले नसके माल्दिभ्स र श्रीलंकाको संयुक्त दाबी !
सन् १९८४ मा नेपालबाटै सुरु भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद बल्ल १३औं संस्करणमा पुगेको छ । पहिलो देखि आठौं संस्करणमा कुनै समस्या भएन । १५ वर्षको अन्तरालमा आठ संस्करण भए । त्यसपछि ६ संस्करण हुनका लागि पूरा २० वर्ष लाग्यो ।
दक्षिण एसियामा रहेका भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव मुख्य कारण हो । त्यससँगै यहाँका पूर्वाधार र द्वन्द्वका कारण पनि समयमा खेलकुद हुन सकेको छैन ।
नियमित रुपमा प्रतियोगिता हुन नसक्नुले सबैभन्दा बढी मारमा खेलाडी नै पर्दै आएका छन् । भारतलाई छोड्ने हो भने अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रका लागि साग अति नै महत्वपूर्ण छ । आफ्नो क्षमता देखाउनका लागि दक्षिण एसियाली खेलकुदमात्र ठूलो माध्यम हो ।
दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण पदकधारी कराते खेलाडी कुशल श्रेष्ठ अहिले प्रशिक्षक भएका छन् । उनी भन्छन्,‘नियमित रुपमा यो प्रतियोगिता आयोजना नहुनुले खेलाडी पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । समयमा आयोजना नहुँदा खेलाडीको एउटा पिँढी नै सकिएका छन् ।
करातेले दक्षिण एसियाली खेलकुद खेल्न नपाएको करिव एक दशक भइसकेको छ । यस क्रममा धेरै उत्कृष्ट खेलाडीहरु पलायन भइसकेका छन् भने कतिपय खेलाडीले उच्च फर्ममा भएका बेला कुनै मौका पाउन सकेनन् ।
यो समस्या नेपालको मात्र होइन, अन्य देशको पनि हो । त्यहाँका खेलाडीले पनि धेरै मौका गुमाएका छन् । यस्तो हुन नदिनका लागि आज बसेको ओलम्पिक काउन्सिको बैठक मुख्य रुपमा केन्द्रित थियो ।
अब अल्फाबेटिकल अर्डरको आधारमा आयोजक छनोट गर्ने निर्णय कान्सिल बैठकमा गरिएको छ ।
यसको अर्थ नेपालपछि अब पाकिस्तानले आयोजनाको मौका पाउनेछ । त्यसका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पत्राचार गर्ने र त्यसको जवाफ पाकिस्तानको ओलम्पिक कमिटीले पठाउनु पर्नेछ ।
यदी पाकिस्तानले आयोजना गर्न नसक्ने जनाएको खण्डमा माल्दिभ्स र पाकिस्तानले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने मौखिक प्रस्ताव गरेका छन् ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद दुई दुई वर्षको अन्तरालमा हुनु पर्ने भनिएपनि विभिन्न कारणले गर्दा प्रतियोगिता सर्दै आएका छन् ।
यसअघि भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण समयमा आयोजना हुन सकेको थिएन भने पूर्वाधारका कारणले गर्दा नेपालमा २०१७ मै हुनु पर्ने खेलकुद २०१९ को अन्तसम्म सरेको छ ।
यस्तै आयोजनाको झण्डा लिएको ६ महिनामा दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिका पदाधिकारीले आयोजक राष्ट्रको पूर्वाधार, सुरक्षा लगायतका पक्षमा निरीक्षण गर्नेछ । चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को आयोजक तोक्न सक्ने ठाउँ पनि आजको बैठकले राखेको छ ।